Mobile World Congress 2021 - Androidsis အကြောင်း Androidsis
El Mobile World Congress တွင် ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပသောထိပ်တန်းတယ်လီဖုန်းဖြစ်ရပ် MWC ဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်များအတွင်းဘာစီလိုနာသည်တယ်လီဖုန်းနှင့်နည်းပညာအသစ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများအတွက်ကမ္ဘာ့စင်တာအဖြစ်နေရာယူထားသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဦး ဆောင်ဖြစ်ရပ် ထောင်နှင့်ချီသောလူများနှင့်ကဏ္theမှအဓိကကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် (Samsung, Apple, LG, Huawei, Microsoft စသည်) သည်လာမည့်လများအတွင်းဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မည့်သတင်းကိုကမ္ဘာသို့တင်ပြရန်ဖြစ်သည်။
Mobile World Congress ၂၀၁၉၉
2016 ခုနှစ်တွင်ရက်ချိန်းအကြားရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နှင့် ၂၈ ရက်နှင့် Androidsis အဖွဲ့သည်အယ်ဒီတာများစွာနှင့်အတူမျှဝေရန်နှင့်အစီရင်ခံရန်ပြပွဲတွင်တက်ရောက်လိမ့်မည် အားလုံးထုတ်ကုန်တင်ပြချက်များ သူတို့အဲဒီမှာဖြစ်ပျက်သော။ စျေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ပေးသောစမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့်တက်ဘလက်အသစ်များအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများကိုမလွတ်စေပါနှင့်။
အဖြစ်အပျက်ကိုသိရန်ဤအပိုင်းတွင်သတင်းအားလုံးကိုချက်ချင်းတွေ့နိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းငါတို့ကတဆင့်လိုက်နာနိုင်ပါတယ် တွစ်တာပရိုဖိုင်း.
MWC 2021 ရှိလိမ့်မည်နည်း ပုံရသည်၊ သို့သော်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်
por Nerea Pereira လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
GSMA သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် Mobile World Congress ကိုဖျက်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါများစွာသောသူတို့သည်ကောင်းကင်သို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။ စာနယ်ဇင်းတွေကနားမလည်ကြဘူး
Mobile World Congress မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်အဆိုးဝါးဆုံးသတင်းမှာ ...
por Nerea Pereira လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
Mobile World Congress 2019 ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီ။ အကြီးဆုံးတယ်လီဖုန်းကုန်စည်ပြပွဲသည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် ...
OUKITEL သည် MWC 2019. တွင်ပါ ၀ င်သောအမှတ်တံဆိပ်များစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာစီလိုနာတွင်ပြုလုပ်သောပွဲ၌ကုမ္ပဏီသည်…
TCL သည် MWC 2019 တွင်ပါ ၀ င်သောကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းသည်ယနေ့ Android တွင်အသုံးအများဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဝန်ကိုအသုံးပြုသည်။
Huawei ၏တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုရန် MWC19 တွင်တိုက်ရိုက်။ Huawei Mate X
၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်၊ MWC24 အမှတ်အသားတွင် Huawei သည်အချို့သောအရာများကို ...
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က OPPO သည်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ 10x optical zoom နည်းပညာကိုလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
MWC 2019 သို့မည်သည့်ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းများရောက်လာမည်နည်း။
မနက်ဖြန် MWC 2019 ကိုတင်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့်စတင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ပြီးဖြစ်သည်။
MWC 2019 ကိုတရားဝင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်အထိဆက်လက်တည်ရှိမည်။ အနည်းငယ်…